Mpaghara mmetụta adịghịzi emetụta | Akwụkwọ ikike cannabis - nhatanha mmadụ
Mpaghara Mmetụta Ọdịmma
Kọwaara mpaghara emetụtara n'ụzọ dị iche iche
mpaghara emetụtaghị ikuku ozi
"Mpaghara mmetụta n'ụzọ na-ezighi ezi"Na illnabis Regulation ọhụrụ & Iwu Iwu pụtara ihe mpaghara obodo nwere ịda ogbenye yana ọtụtụ njide metụtara cannabis. Mpaghara ndị a na - ekepụrụiche na - eme ihe site na ụzọ abụọ n'ụzọ atọ maka ndị na - achọ ịha nhatanha na-elekọta mmadụ. Ya mere map nke mpaghara ndị a na - enwe mmetụta dị ezigbo mkpa. Ugbu a Ngalaba Azumaahịa na Akụ na ụba maka Illinois na kwesịrị ịnọ ebe a oge ọ bụla ugbu a.
Mụọ maka mpaghara emetụtara na Illinois
"Mpaghara emetụtara n'ógbè ahụ adịghị ama ama" putara:
"Mpaghara Mmetụta Azụmaahịa" pụtara traktị ma ọ bụ mpaghara ntụnyere yiri nke ahụ na-emeju usoro ndị a dị ka Ngalaba Azụmaahịa na Ohere Maka Akụ na ụba, kpebiri:
(1) gboo opekata mpe otu.
(A) Mpaghara nwere mpaghara ịda ogbenye ọbụlagodi 20%
dị ka ọnụ ọgụgụ gọọmenti etiti decennial ọhụụ; ma obu
(B) 75% ma ọ bụ karịa ụmụaka nọ na mpaghara ahụ
isonye na mmemme oriri na ọ federalụ freeụ gọọmenti etiti dị ka ọnụ ọgụgụ ndị sitere na Boardlọ Akwụkwọ Ọchịchị Mmụta; ma obu
(C) opekata mpe 20% nke ụlọ dị na mpaghara ahụ
nweta enyemaka n'okpuru Mmemme Enyemaka Nutrition; ma obu
(D) mpaghara ahụ nwere ọnụego enweghị ọrụ, dika
kpebisiri ike na Ngalaba Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ, nke ahụ bụ ihe karịrị 120% nke nkezi enweghị ọrụ mba, dị ka Ngalaba Ndị Ọrụ nke United States kpebiri, maka oge opekata mpe, afọ abụọ gafere tupu ụbọchị nke ngwa ahụ; na
(2) nwere oke njide, nkwenye, na
mkpanaka metụtara ire, ihe, ojiji, ịkụ, mepụta, ma ọ bụ ibu nke mkpụrụ osisi cannabis.
Esemokwu na-ezighi ezi bụ map - DCEO
Na Septemba 4, 2019, Ngalaba Na-ahụ Maka Ego na Ọrụ Ndị Ọrụ (IDFPR) nke Illinois mere ka Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị (FAQ) nke ndị okenye na-eji weebụsaịtị cannabis wepu ụbọchị ụbọchị 60 na ntinye aka na otu ụlọ ọrụ na -emepụta maapụ maka Mmetụta Esemokwu Na-akpata Mpaghara.
Ọnọdụ ndị metụtara DCEO setịpụrụ adịghị mma
Ajụjụ FAQ na-agụbu: